भरिन थाले अस्पतालका शय्या – Health Post Nepal
भरिन थाले अस्पतालका शय्या
२०७८ वैशाख ११ गते १६:०३
कोरोना संक्रमणले गर्दा उपत्यकाका अस्पतालका रहेका शय्या भरिन थालेका छन्। दैनिक संक्रमितको संख्याबढ्न थालेपछि शय्या भरिन थालेका हुन्।
यही वैशाख ३ गते ९०० संक्रमित भेटिएकामा वैशाख १० गते करिब तीनगुणा २ हजार ५५९ जना पुगेको थियो। चिकित्सकका अनुसार अहिले नेपालमा १२.३ प्रतिशत संक्रमण दर रहेको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा कोराना संक्रमितले अस्पतालका शय्या भरिँदै गएको छ।
शुक्रराज अस्पतालका २२ सघन उपचार कक्षमध्ये २० र १२ भेन्टिलेटर संक्रमितले भरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ५५ आइसोलेसन शय्यापनि भरिएका छन्। दैनिक आठ-नौ जना उपचारपछि घर गएपनि त्यतिकै संख्यामा बिरामी आउने उनको भनाइ छ।
उनले अस्पतालमा संक्रमितबाट निमोनिया लागेका बिरामीलाई मात्र भर्ना गरेको जानकारी दिए। ‘हामीले सामान्य ज्वरो, रुघाखोकी, जिउ दुख्ने खालका बिरामीलाई भर्ना गर्ने गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘अलि जटिल खालका निमोनिया र अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीलाई मात्र भर्ना गरेका छौं।’
संक्रमित बढ्न थालेपछि विनाकारण घरबाट ननिस्कन र निस्कनै परे मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी कायम गर्न पनि उनले आग्रह गरे। अहिलेको कोभिड–१९ को भाइरस युके भेरियन्ट र डलब भेरियन्ट रहेकोले संक्रमण सार्नसक्ने अत्यधिक क्षमता रहेको छ।
अहिलेको कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुपले एकजनाबाट एक घण्टामा ६०-७० जनामा संक्रमण सार्न सक्छ। संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेकोले सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्ने राजभण्डारीले बताए। ‘अहिलेको भाइरसले संक्रमण लागेको चार-पाँच दिनमा नै आक्रमण गर्ने खालको छ’, उनले भने, ‘अहिले ५० वर्षमूनिका मानिसलाई पनि बढी संक्रामक देखिएको छ।’
यस्तै वीर अस्पतालमा पनि कोभिड–१९ का बिरामीलाई छुट्याइएको शय्या भरिन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले उपत्यकामा ७७ जना सघन उपचार कक्षमा र ४० जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्।
मुलुकभरि १ हजार १८० सघन उपचार कक्ष र ५१२ भेन्टिलेटर रहेका छन्। तीमध्ये १७३ जनाको सघन उपचार कक्ष र ५७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
वीर अस्पतालका कोभिड-१९ सम्पर्क व्यक्ति डा. अच्युत कार्कीले १७ मध्ये १५ सघन उपचार कक्ष, पाँच भेन्टिलेटर पूरै भरिएको बताए।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा कोरानाका बिरामीले भरिएका छन्।
अस्पतालका कोभिड-१९ फोकल पर्सन डा. प्रविन नेपालले १०० शय्यामध्ये सबै भरिएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालले आज थप ४० शय्या थप गर्न लागेको हो। यस्तै २० मध्ये १८ सघन उपचार कक्ष र आठमध्ये सात भेन्टिलेटरमा पनि संक्रमित रहेको उनले जानकारी दिए।
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी श्वास फेर्न गाह्रो, ज्वरो, छाती दुख्ने, निमोनियाजस्ता समस्या रहेकाले ६० प्रतिशतलाई अक्सिजन दिनु परेको कार्कीले जानकारी दिए। अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये अधिकांश ४०-५० उमेर समूहका बिरामी रहेका छन्।
यस्तै वीरमा ७६ आइसोलेसनमध्ये ६६ वटा संक्रमितले भरिएका छन्। दैनिक आठ–नौ वटा नयाँ बिरामी आउने गरेका कार्कीले बताए। दैनिक संक्रमित थपिँदै गए आफूहरुले बिरामीलाई राख्न नसक्ने उनले बताए। सानो ठाउँ भएकाले उपचार गराउन आउने बिरामी र खोप लगाउन आउने व्यक्तिमा सामाजिक दूरी कायम राख्न नसकिएको जानकारी उनले दिए।
संक्रमित बढ्न थालेपछि वीरले नजिकैको सर्जिकल भवनमा अबको केही दिनमा कोभिड-१९ का बिरामी राख्ने तयारी गरेको छ।
त्रिवि अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले ५५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको जानकारी दिए। उनले १२ जना आइसियु, पाँचजना भेन्टिलेटरमा र ३८ जना एचडियुमा उपचाररत रहेको बताए। अस्पतालमा ६० आइसियु र ५० एचडियू रहेका छन्। काफ्लेले बिरामीलाई सुरुमा अब्जर्वेशन गरी राख्ने र समस्या देखिए आवश्यकता अनुसार आइसियु, एचडियु र भेन्टिलेटरमा राखिने बताए।
अस्पतालले आइसियुमा एकजना नर्सले एकजना बिरामी र एचडियुमा एकजना नर्सले दुईजनासम्म बिरामी हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्ने भएकोले ५० आइसोलेसन शय्या थपिन थालेको जानकारी उनले दिए।
शुक्रराज अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलाले संक्रमण पहिलोभन्दा संक्रामक रहेकाले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरे। उनले संक्रमण यही गतिमा अघि बढे बिरामीले उपचार नै नपाउने स्थिति आउनसक्ने भन्दै मानिसलाई घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गरे। उनका अनुसार कोभिड–१९ को अहिलेको लहरमा संक्रमित सिकिस्त हुने अनुपात पहिलो लहरको तुलनामा बढिरहेको छ।
नेपालमा अहिले २ लाख ९४ हजार ६०१ जना संक्रमित भइसकेका छन्। जसमध्ये २ लाख ७६ हजार ७५५ जना निको भएर घर फर्किएका र ३ हजार १२३ जनाको संक्रमणको कारणले निधन भइसकेको छ।
यस्तै मुलुकभरि १३ हजार ५७८ होम आइसोलेसन र १ हजार १४६ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।
संक्रमितमध्ये १.१ प्रतिशतमा मृत्युदर र प्रति १० लाखमा १०७.८ जना मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। ५०० भन्दाबढी संक्रमित भएका जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, बाँके र रुपन्देही रहेका छन्।